L'OUSTAL DU SERRE - I-Airbnb
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguPatricia
Ifakwe kwesinye sezithili zembali zeValleraugue, le studio intle, ihlaziywe ngokupheleleyo iya kukuvumela ukuba uchithe ixesha lokuhlala eCévennes National Park. Ilanga kakhulu kwaye inombono obalaseleyo, i-cottage ibekwe ngamanyathelo ama-2 ukusuka ekuqaleni kokunyuka kwamanyathelo angama-4000 kunye neevenkile ezikwilali.
istudiyo esimalunga ne-25 M2 ebandakanya ibhedi yesofa enebhedi eyi-140, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye neWC, ikhitshi elinefriji, iihob zokungeniswa ezi-2, i-microwave eyi-1, umenzi wekofu, iTV eyi-1 kunye nendawo yokupaka yoluntu ekufutshane.
Kufuphi uya kufumana iinkundla zentenetya, ichibi ehlotyeni lokuqubha kunye nabalobi iHérault kunye neDourbie, imilambo ehlelwe kudidi loku-1. Ngexesha eliphezulu, fumana imisebenzi yelali, imarike yasebusuku, ukunyuka kwe-4000, amadlelo ehlobo ...
4.76 · Izimvo eziyi-101
indawo ezolileyo nabahamba ngeenyawo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Valleraugue